Sweden oo dhaqan gelinaysa sharci xakamaynaya argagixisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Ygeman, inrikesminister, i studion. Foto: Maria Ridderstedt/Sveriges Radio
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Henrik Montgomery/TT.
Sweden oo dhaqan gelinaysa sharci xakamaynaya argagixisada
Sweden oo dhaqan gelinaysa sharci lagu xakamaynayo argagixisada
La daabacay fredag 9 januari 2015 kl 13.00
Ka dib weerarkii ka dhacay Paris ee loo geystay wargeyska dayaacada badan ee Charlie Hebdou ayaa hadda dawladu rabta in ay soo dedejiso sharci cusub oo ka dhan ah argagixisada, fududaynaya in si deg deg ah baadhitaan loogu sameeyo waxaa loogu yeedho safarada argagixsada. Sharcigan ayaa la filayaa in uu dhaqan galo sannadkan
-Habka argagixisadu u shaqayso ayaa in ay abuuraan khilaaf, sidoo kale Sweden, sida Faransiiska. Khatarteeda ayay leedahay marka rabshad lagala hortago kelmada xorta ah. Hadda ayaanu rabnaa in aan xoojino shaqadayada ah in aanu daraasad ku samayno khatarta iyo xagjirka dhibaatooyin gaysan kara, sidaa waxaa wargeyska Dagens Nyheter saaka ku qortay wasiiradda dhaqanka iyo dimuqraadiyada Sweden Alice Bah Kuhnke (MP)
Dawlada ayaa hadda ku hawlan sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada, Anders Ygeman, wasiirka arrimaha gudaha Sweden.
-Xaqiiqdu waxaanu qaadi doona tallaabooyin wax ku ool ah ayaamaha iyo usbuucyada soo socda, si aanu ula dagaalano argagixisda iyo fursadaha ay ugu safri karaan waddanka dibadiisa, si ay uga soo dagaalamaan. Waa in aan ogaano kuwa hawlahaas ku lug leh, si aanu sharciga u hor keeno markay soo noqdaan, sidaa ayuu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha Sweden Anders Ygeman (S)
Ilaa hadda ugu yaraan 110 qof oo Swedish ayaa u safray waddamada Suuriya iyo Ciraaq si ugu biiraan Alqaacida iyo Daacish, sida laga soo xiganayo ciidamada nabad sugida ee Sweden.
Imika ayaa dawladu wadda hindise ay damacsan tahay in ay ka dhigto sharci dadka Swedishka ka mamnuucaya in u safraan waddanka dibadiisa si ay ugu dagaalamaan ururada argagixiso, sharcigan oo dawladu rabto in ay meel mariso sannadkan, mar kale Anders Ygeman.
-Waxaanu mamnuuci doona in qofku tabobar siiyo ama maalgeliyo oo qayb qaato dagaalada argagixiso. Waxaanu kale oo dembi ka dhigaynaa in ka qab qaadashada dagaladaas, sababta aanu u rabno in aan dedejino baadhitaanka ayaa ah, in uu jiro xeer ka soo baxay Qaramada Midoobay mamnuucaya ficiladan.
Tirada dadka reer Sweden ee safarada ugu waddanka dibadiisa si ay uga qayb qaataan ficilo argagixiso ayaa ah mid aad u saraysa haddii la barbar dhigo waddamaka dhigeeda ah. Ciidanka nabad sugida Sweden ee Säpo ayaa ku qiyaasaya 150 ilaa 200 tirada dadka Swedishka ee lagu tuhunsan yahay in u waddanka dibadiisa ugu baxeen safaro noocan ah, balse aan la xaqiijinkarin.
Anders Ygeman, wasiirka arrimaha gudaha Sweden, oo ciidamada nabad sugidu ay hoos tagaan wasaaradiisa ayaa arrinkan ka hadlaya.
-Middani waxay ku tusaysaa in loo baahan yahay in aan qaadno tallaabooyin badan oo wax ku ool ah, si aan dadka loogu shaqaalayn in ay ka qayb qaataan ficiladan. Waa in aan haysanaa tallaabooyin la marin karo kuwa raba in ay waddanka ka baxaan. Waxaa kaloo waajib ah in aan la socono kuwa waddanka ku soo noqonaya, si aan sharciga ugu horkeeno dembiga ay galeen, oo aanay si dembi la’an ah u dhex joogin Sweden, ayuu leeyahay Anders Ygeman.
Wasiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman ayaa ku andacoonaya in dadka lagala noqon karo basaboorka Sweden, haddii loo baahdo
-Inkastoo weli baadhitaanku socdo, haddana basaboorka waa laga qaadi karaa, haddiiba ay socdaan baadhitaan, haddii ay jirto sabab shaki keeni kartaa, xeer ilaaliyahu wuxuu go’aamin karaa go’aan mamnuucaya safarada, markaana waa la qaadi kara basaboorka.
Xukuumada hadda ayaa sidoo kale rabta in ay Midawga Yurub ka ansixiso in si fudud loo helo macluumaadka rakaabka diyaaradaha, tusaale ahaan maclumaadka ku qoran tigidhka qofka, tirada shandadaha uu sito, iyo dhamaan macluumaadka dadka ka dhoofaya ama ka soo degaya waddamada ka tirsan Midawga Yurub. Sida uu sheegaayo Anders Ygeman midan ayaa fududaynaysa in isha lagu hayo socdaalayaasha.
-Waxaa fududaanaysa in la ogaado kuwa safrayaa iyo meesha ay ku socdaan, sidan waxa lagu joojin kara dadka u safraaya in ay qayb qaataan ficilo argagixiso, sidoo kalena waxay fududaynaya in sharciga la horkeeno kuwa dembigaas galay ee soo guryo noqonaya. Ayuu leeyahay Anders Ygeman, wasiirka arrimaha gudaha Sweden
Geesta kale, sida ay saaka ku dabaacday wasiiradda dhaqanka iyo dimuqraadiyada Alice Bah Kuhnke, wargayska Dagens Nyheter, dawlada ayaa soo bandhigaysa hindisayaal lagu xoojinayo dimuqraadiyada lagagana hortegayo xagjirnimada
Isha: P1, Ekot, DN